Mila vatomamy foana ny vatan'olombelona, ​​na fahavaratra, lohataona, ririnina na fararano. Nefa raha tsy amin'ny lohataona amin'ity olana ity dia tsy mitsangana izany, satria misy legioma sy voankazo maro be, avy eo dia ny fahasarotana amin'ny fotoam-piotazana ny ririnina. Mazava ho azy, afaka misotro zava-maniry vitaminina vitamine pharmacie ianao, saingy tsaroanao ny siramamy azo avy amin'ny siramamy voapoizina, avy amin'ireo legioma izay efa nitombo teo amin'ny faritra niaviany ary ny tombony ho azy ireo, mihoatra noho ny tamin'ny imports. Ahoana no handraisan-tsakafo mofomamy tsara sy mahasalama amin'ny fotoana iray isan-taona, dia hilaza aminareo izao.
Sakafom-boankazo voajanahary voajanahary - fanatsarana
Mety ho mora kokoa noho ny fanomanana ny jiosy izany - mametraka legioma ao anaty jiro, segondra segondra, ary vonona ny jiro. Saingy misy sekretera sasantsasany, amin'ny fampiasana izay, afaka mahazo tombony be indrindra ianao ary manandrana ny fisotroana.
Voalohany, tandremo ny zava-misy fa raha manamboatra sokatra mihinana legioma voasesika ianao, dia tsy voatery mampiasa voankazo voankazo izay feno tanteraka ary tsy manimba ny fery. Raha tsy azonao antoka ny niandohan'ny legioma iray, dia esory ny lanjan-tsakay maivana kokoa noho ny mahazatra, satria misy poizina be dia be.
Tsy voatery hanampy sira sy dipoavatra ho an'ny sira legioma - ny zava-manitra dia mampihena ny toetrany mahasoa. Tsara kokoa ny manampy tongolo lay kely, ny tombony dia ho betsaka kokoa, ary ny tsirony dia hitombo kokoa amin'ny famafazana. Ny fampiasana zava-pisotro toy izany dia maniry avy hatrany rehefa avy niomana, satria miharatsy haingana.
Matetika karazana karaoty , voatabiha sy tomombin-kisoa no ampiasaina amin'ny endriny madio, saingy, ohatra, ny siramamy vita amin'ny ronono na ny bakteria dia tsy vitan'ny hoe mahafinaritra fotsiny, fa manimba ny endriny madio. Noho izany, izao dia hanambara aminao ny safidy maromaro momba ny fitambaran'ny legioma mba hanomanana ny jiosy:
mba hampihenana ny lanjany - carrot and spinach amin'ny 5: 3 na karaoty, ravina sy kôkômbra - 10: 3: 3;
hanamafisana ny rafi-pitabatabana - ravina selera (3 bundles), voatabia (antsasany), kara (100) g;
rehefa tsy matavy - karaoty - 5 p. karaoty - ravina 3, parsley - bundle;
Hanatsara ny metabolism - karoty, bibikely, fakan'ny selera, androma - 2: 1: 1: 1.
Ankoatra izany, afaka manomana sokatra karpaty ianao (1: 1) na sokatra karakam-bary (7: 3).
Nomeny anao ireo fomba mahazatra mahazatra amin'ny sakay legioma. Ampiasao ny legioma isan-taona aty amin'ny faritra misy anao, ary mahazo tombony be indrindra.
Milkshake miaraka amin'ny akoho
Toaka avy amin'ny mainty mainty
Mofo avy amin'ny vary
Kvass from turnip
Vodka amin'ny cranberries - recipe
Ahoana no ahitana ny famantarana ny valifaty?
Ahoana no fomba tsara hanomanana katsaka?
Ireo kintana 15 kintana, namoaka ny anganongonan'ny lehilahy manambady
Syndrome tranainy antitra
Ahoana no fanaovana bubble savon?
Fanomanana ny lozabe amin'ny ririnina - fotoana fanao
Ny efitranon'i Konya
Ny fitaratra gynecological
Ahoana ny fomba hanasana kisoa amin'ny milina fanasana?
Dihy ho an'ny ankizy amin'ny taona vaovao any am-pianarana
Julia Roberts tao amin'ny mpandresy avy any Amazon
Misy zava-pisotro 6 izay baikoina ao anaty baoritra marevaka
Inona no hanomezana ahy ny rafozam-baviko?